Previous Article Ọba Akwụkwọ Anambra Emerùbela Izu-ụka Ọba Akwụkwọ Nke Ahọ 2019
Next Article Ọba Akwụkwọ Ala Nigeria Eburula Ozi Nkwàlite Agụmakwụkwọ Gaa Ebenebe
Ụbọchị niile bụ maka nke onye ohi mana otu ụbọchị bụ maka nke onye nwe ụlọ. Okwu a kọwara ọchụchụ ụlọọrụ na-ahụ maka Ule n'ala anyị, NECO, chụrụ ndị ọrụ ya mmadụ dị iri asaa n'ọnụ ọgụgụ maka Asambodo adịgboroja.
Ndị isi NECO gara n'ihu chụọ mmadụ ndị a, dịka o siri dị n'ozi ha wepụtara site n'aka onyeisi Mgbasa Ozi na Mmekọrịta Ọhaneze ụlọọrụ ahụ, Azeez Sani, n'ụbọchị Fraịdee, ka ha natachara ozi maka nnyochaa asambodo nke otu kọmitii na-ahazi ihe nyochara. Kọmitii ahụ kpọrọ ndị ahụ o metụtara were gbaa ha ajụjụ ọnụ gbasara asambodo ha ji arụ ọrụ. Ụfọdụ n'ime ha kwupụtara n'asambodo ha bụ nke adịgboroja.
Ụlọọrụ ahụ kwuru na ọchụchụ ahụ bụ nke mbụ ọtụtụ nnyocha nke asambodo na-aga n'ihu n'ụlọọrụ ahụ. Dịka ọ dị n'ozi ha, kọmitii ahụ kpọtụrụ ụlọ akwụkwọ ndị ahụ ndị ọrụ ji asambodo ha nke mere ka kporokpoto gbaa n'ihu ehi maka ụlọ akwụkwọ ndị a gọnarịrị ha na ha amaghị ndị ha bụ.
Sani kwuru, "Ndị isi ụlọọrụ ahụ nyochara nchọpụta ahụ nke ọma tupu ha ebinye aka ka a chụọ ndị ọrụ ndị ahụ o metụtara.